ထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ အခြေအနေကြောင့် ခံစားလာရတဲ့ Apathy - Hello Sayarwon
အရင်လိုမျိုး အချိန်တွေ ဘယ်တော့များမှ ပြန်ရပါ့မလဲ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စကားပြော စားသောက်ကြရတာတွေ၊ အလုပ်တွေလုပ်ရတာ၊ သင်တန်းတွေ ကျောင်းတွေတက်ရတာ၊ ခရီးတွေ သွားရတာလိုမျိုး ပေါ့ပါးလွတ်လပ်မှုတွေကို ဘယ်တော့မှများ ပြန်ရပါ့မလဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေက အခုလို ကာလမှာ လူတိုင်း လိုလိုရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ တွေးမိနေမယ့် အရာပါ။
ကပ်ဆိုးကြီးရဲ့ ဖိစီးမှုကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီး စိတ်ညစ်နေရသူတွေ၊ ချစ်ခင်ရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရသူတွေက ကပ်ကြီးအချိန် ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုများလာလေပါ။ ဒီလို ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အတူ စိတ်ထဲမှာ ခံစားလာရတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာ တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ Apathyလို့ ခေါ်တဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားနိုင်စွမ်း၊ လုပ်ဆောင်လိုစိတ်တွေ ကင်းမဲ့လာတာပါ။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ လူတော်တော်များများမှာ သူကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်ဘဲ ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာတစ်ရပ် Apathyအကြောင်းလေး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
Apathyဆိုတာ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်နေကျ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတာကို ဆိုလိုတာပါ။ လူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံဖို့လည်း စိတ်မပါတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ ဒီလို ဖြစ်နေတာက လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကို ကျဆင်းစေနိုင်သလို ဆက်ဆံရေးတွေကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ဘဝ ပျော်ရွှင်မှုကိုပါ ပျောက်ဆုံးစေတာပါ။
နားလည်လွယ်အောင် ပြောပြရရင် နေ့စဉ်ဘဝမှာ အကောင်းဆုံး နေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှု (motivation) ပျောက်ဆုံးနေတာပါ။ လူတိုင်းလိုလိုက ဘဝမှာ ဒီအခြေအနေမှာ တစ်ကြိမ်လောက်တော့ မလွဲမသွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးနေပြီး နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ မရှိတော့တာပါ။ ဒါက apathyရဲ့ ပုံမှန် အခြေအနေ တစ်ရပ်ပါ။
Apathyက အာရုံကြော နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လက္ခဏာ တစ်ရပ်ပါ။ ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ရပ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ နာတာရှည် ရောဂါ တစ်ရပ်ရပ်ကို ခံစားနေရမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ မကုသဘဲ ထားမယ်ဆိုရင်လည်း ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။
Apathy ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း
Apathy ကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့
နာတာရှည် အပျော့စား စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေရတာတွေပါ။
Apathy စိတ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေမှာ အခုလို အမျိုးအစားတွေ ကွာခြားပါသေးတယ်။
Emotional apathy – အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ခံစားမှုရော အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ ခံစားမှုပါ မရှိတာ
Behavioral apathy – ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးနေတာ
General apathy- စိတ်အားထက်သန်မှု မရှိတာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှု အားနည်းလာတာ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး နည်းပါးလာတာ
Bystander apathy – အရင်က အမြင်မတော်ရင် ကူညီခဲ့ပါလျက် အကူအညီ လိုနေမှန်း သိပေမယ့် ကူညီပေးဖို့ စိတ်အားထက်သန်မှု မရှိတော့တာ။ ကုညီပေးချင်စိတ် ပျောက်ဆုံးနေတာ
Compassion fatigue – စိတ် တအားပင်ပန်းပြီး အခြားသူတွေအပေါ် သည်းခံနိုင်စွမ်း နည်းသွားတာ တွေဆိုပြီး အမျိုးအစားတွေ ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်နေကျ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ခက်နေမယ်
မတူညီဘဲ ကွာခြားမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ခံစားရမယ်
နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိဖြစ်နေမယ်
လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် စိတ်အားထက်သန်မှု ကင်းမဲ့နေမယ်
ကိုယ်ထဲမှာ အားမရှိသလို ခံစားရမယ်
လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိဖြစ်နေမယ်
ကောင်းတဲ့ ကိစ္စမှာရော မကောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေမှာပါ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် စိတ်မပါဘဲ ဖြစ်နေမယ်။
အခုပြောခဲ့တဲ့ လက္ခဏာတွေက စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် တူနိုင်ပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ကျတာက နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရဲ့ အသွားအလာကို နားလည်ပေမယ့် Apathy ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ လုပ်ဆောင်နေကျ အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့တောင် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို သက်သာအောင် လုပ်ရမလဲ။
ခံစားနေရတဲ့ Apathyကို သက်သာစေဖို့ဆိုရင်
goal သေးသေးလေးတွေ ချမှတ်ပါ – ရည်မှန်းချက်ကို အကြီးကြီး ထားတာမျိုး မလုပ်ဘဲ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရှိတဲ့ ခပ်သေးသေးလေးတွေကို ချမှတ်ပါ။ သေးသေးလေးတွေကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
လုပ်ငန်းကြီးကြီးတွေကို သေးငယ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေ အဖြစ် ခွဲထုတ်ပါ – လုပ်ငန်းကြီးကြီးတွေကို တစ်နေ့တာထဲမှာ ပြီးဆုံအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့က ခက်ပါမယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းကြီးကြီးတွေကို တစ်နေ့တာ ပြီးလောက်မယ့် ပမာဏလေးတွေ ပိုင်းခြား သတ်မှတ်ပြီး ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
အကြောင်းရင်းခံကို ရှာဖွေပါ – ဘယ်အချက်က စိတ်ကို ထွက်ပေါက်ပိတ်စေတာလဲဆိုတာကို ရှာဖွေပြီး ဖြေရှင်းပါ။ ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်တာမျိုးဆိုရင် သက်သာစေမယ့် အခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ်ကို ရှာဖွေပါ။
နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်နေကျ ပုံစံကို ပြောင်းလဲပါ – နေ့တိုင်း ဒီအလုပ်ပြီးရင်း ဒီအလုပ်ပဲ လုပ်ရတဲ့အခါ စိတ်ညစ်ညူးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ် လုပ်နေကျ အလုပ်လေးတွေကို နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် ပုံစံ ပြောင်းလိုက်ပါ။
What Is Apathy? https://www.verywellmind.com/apathy-lethargy-and-anhedonia-379832 Accessed Date 1 October 2021
What is Apathy and Why Does it Occur? https://www.news-medical.net/health/What-is-Apathy-and-Why-Does-it-Occur.aspx Accessed Date 1 October 2021